Screens ngokuba amabhati uvele on izinto emakethe yesimanje akunjalo kudala, kodwa ngokushesha yatha- omkhulukazi phakathi abathengi. Lokhu akusona isimanga, ngoba ngaphambili isikhala ubuningi ngaphansi yokugezela isidingo ivalwe kunalokho unaesthetic izindlela izingxenye plastic, ipulangwe noma chipboard izinsalela. Namuhla, uhla zesikrini ekhethekile, ekwazi ukwenza hhayi umsebenzi zokuhlobisa kodwa kuphela esebenzayo, ubanzi kakhulu. Into esemqoka - ukunquma ngayiphi injongo udinga umkhiqizo, bese ukhetha imodeli elifanele.
Ngokuthenga izikrini for yokugezela, kufanele sinake izindaba okuxoxwa ngazo kulezi okwakwenza uzimele. Kufanele kube isikhathi eside futhi ukumelana ukugqwala, noma ngokushesha, esikhundleni ziyakhanga iphaneli, uzibeka engcupheni yokudala isikrini izimisele ibuthuntu. Kungcono uma komzila aluminium Uhlaka sizosetshenziswa ngohlaka. Ngezinye izikhathi esibukweni phezu okugeza ifakwe imilenze extra, okuyinto lula kakhulu ukufakwa futhi kusiza ukulungisa ukuphakama umkhiqizo. Ngokuphathelene ubude panel ke, njengoba umthetho, it kuhluka imitha nohhafu kuya 1.7. Ezinye izikrini ngokuba amabhati eyenzelwe imikhawulo amathangi noma izitsha ukuma ongaphambili omise, ube usayizi yabo.
Manufactured kusukela panel plastic ngokuba amabhati, chipboard, MDF noma laminate amanzi. Palette umbala mikhiqizo akugcini, ungakhetha noma iyiphi imodeli, ngisho imibala kwakwakhiwa kakhulu. imodeli ethandwa kakhulu matt shockproof noma ingilazi enombala, ngezinye izikhathi lokhu kutholakala anezibonisi noma shiny esibukweni ebusweni. Nice kakhulu ngifuna izikrini ezinemithelela iphethini yemvelo ngezinto zemvelo: .. Izinkuni, imifekethiso, njll Kwimakethe anhlobonhlobo imikhiqizo efanayo abakhiqizi ezifuywayo angaphandle. Muva nje, ukuthandwa waqala ukuthola okugeza isikrini esakhelwe, okuyinto ekahle kakhulu ukuklanywa noma iliphi igumbi. Ngempela, kulesi simo, kokubili imininingwane wezangaphakathi ayokwenziwa besenze nesitayela esifanako, ukuba umklamo iyunifomu.
Abaningi bafuna phakathi abathengi ujabulele izikrini multifunction ngokuba amabhati, okuyinto ukudlala indima eydijithali ukugcina insipho kanye nezinye trifles yasendlini. Le mikhiqizo anemisila iminyango, ngemuva okuyizinto emashalofini ezifihliwe futhi elula. Izikrini, amakhabethe zakhiwe ngezinto amanzi nemithi eliphezulu, okuyizinto yokuhlanzeka kakhulu wageza kahle.
Screens ngokuba amabhati Kulula kakhulu ukufaka. imodeli ngamunye iza imiyalelo enemininingwane, echaza yonke inqubo kokufaka lo mkhiqizo. Into esemqoka ukuthi panel ilingane isikhala ngaphansi yokugezela nazo zonke wekhasi. Kungcono ukuba ususe konke Ubukhulu ke ukukhethwa isibonisi oyifunayo emiphongolweni.
Inani izikrini ngokuba amabhati akuyona nje inqubo okulula ukufakwa kungabuye kalula zezikhali lapho iphaneli kunesidingo. Lokhu kuyisici esibalulekile, ngoba esikhaleni ngaphansi yokugezela Uyi ware sanitary zokuxhumana.